Okwu Enwela Mperi Na-anwa Imepe Faịlụ
Home ngwaahịa DataNumen Word Repair Okwu Enwela Mperi Na-anwa Imepe Faịlụ
Zuru ezu Ozi banyere "Okwu nwetara njehie Trygbalị Mepee Njikwa" Njehie
Mgbe ị na-emeghe akwụkwọ Okwu mebiri emebi na Microsoft Word 2003, ị ga-ahụ ozi njehie na-esonụ:
Okwu nwetara njehie na-agbalị imeghe faịlụ ahụ.
Gbalịa mee ihe ndị a.
* Lelee ikikere faịlụ maka akwụkwọ ma ọ bụ draịva.
* Gbaa mbọ hụ na enwere ebe nchekwa zuru oke na ohere diski.
* Mepee faịlụ ahụ na onye ntụgharị ederede Iweghachite.
N'okpuru ebe a bụ nseta ihuenyo nke ozi njehie:
Pịa bọtịnụ "OK" iji mechie igbe ozi.
Mgbe ụfọdụ akụkụ nke akwụkwọ Okwu rụrụ arụ, ị ga-enweta ozi njehie a kpọtụrụ aha n'elu. Ma ọ bụrụ na nrụrụ aka dị njọ ma Okwu enweghị ike iweghachite ya, ịnwere ike iji ngwaahịa anyị DataNumen Word Repair imezi Okwu Okwu ma dozie njehie a.
Oge ụfọdụ Okwu ga-enwe ike iweghachite akụkụ nke ihe ndị dị na akwụkwọ rụrụ arụ, mana akụkụ ndị fọdụrụ enweghị ike iweghachite. N'ọnọdụ dị otú a, ị nwekwara ike iji DataNumen Word Repair iji weghachite akụkụ ndị a.
Ihe nlere ederede ederede ederede nke gha emehie. Njehie6_1.doc
Faịlụ rụziri na DataNumen Word Repair: Mperi6_1_fixed.doc